Eden Hazard oo ka warbixiyay xidiga uu jeclaan lahaa in uu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’Or 2018 – Gool FM
Eden Hazard oo ka warbixiyay xidiga uu jeclaan lahaa in uu ku guuleysto abaal marinta Ballon d’Or 2018
(Chelsea) 12 Okt 2018. Laacibka kooxda Chelsea Eden Hazard ayaa aaminsan in ciyaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid Luka Modric uu ku guuleysan doono abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or, taasoo la bixin majalada France Football 3-da bisha December ee sanadkan.
Luka Modric ayaa kusoo kala guuleestay abaal marinada ciyaaryahanka ugu fiican yurub iyo aduunka, kadib markii uu kooxda Real Madrid lasoo qaaday tartanka Champions League markii saddexaad ee xiriir ah iyo in xulkiisa qaranka Croatia uu la gaaray finalka koobka aduunka 2018 ee dalka Russia.
27 sano jirka reer Belgiam ee Eden Hazard ayaa ka mid ah xidigaha u sharaxan abaal marintan Ballon d’Or , balse wuxuu aaminsan yahay in uu ku guuleysan doono xidiga reer Croatia ee Luka Modric.
“Ma aaminsani in aan abaal marintan ku guuleysan doono, waxay ila tahay in Luka Modric uu u qalmo inuu ku guuleysto”.
“Waxaa jira 3 ilaa 4 ciyaartoy, waxaan dhihi karaa Raphaël Varane, sababtoo ah wax badan ayuu kusoo guuleestay, lakiin dhab ahaantii waxaan u maleynayaa in Modric uu ku guuleysan doono”.